Posted by ညီလင်းသစ် au 10.5.09
ကိုညီလင်းရေ မှန်ဘီလူးကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ :P
အတော်ကို ကြည်လင်တာပဲ ကိုညီလင်းရ။ အခုချိန် အဲဒီကင်မရာနဲ့ လာရိုက်ပေးရင် ထွက်ပြေးမိမယ်ထင်တယ်။ :D
ပုံတွေအ၇မ်းကိုကောင်းပါတယ်။ ချစ်စ၇ာကောင်းတဲ့ သားလေးပါ နော်။
အဲဒါနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လဲ ထွက်ပြေးမယ်...။
This is my first visit to you. Simply, i am sure I will visit your blog again. I like your writing style and opinions.
By the way, ur son is way so cute.
ရွာသားလေးရေ...ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ဒီမှန်ဘီလူးကတော့ အလင်းသာနိုင်မယ်ဆိုရင် ပုံထွက်မဆိုးလှဘူး၊
ထွက်တော့မပြေးပါနဲ့ မယုဝရီရာ...သဘာဝအတိုင်း ပေါ့ ...နော၊ :)
ဟား...ကိုနေညိုရင့်လည်း ထွက်ပြေးတဲ့အထဲ ပါတာကိုး...၊ :D
Wai...thank you for your visit. Please, do come whenever it is alright for you. Welcome....!
အကိုညီလင်းသစ်နဲ့ အပြင်မှာတွေ့ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်တော်သူမို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရတာ ၀ါသနာသိပ်ပါတဲ့ ညီမအတွက် အကူညီပေးရမယ်နော် :P ။ မှန်ဘီလူးကြီးနဲ့တော့ ဟုတ်ဘူးနော် :)